PSG: Neymar dia nanambara vaovao tsara - teles relay
PSG: Neymar dia nanambara vaovao tsara
Tao amin'ny horonan-tsary navoaka tao amin'ny kaonty Twitter-ny, Neymar dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa tapitra ny fiarahamiasa miaraka amin'i Nike hanatevin-daharana an'i Puma.
“Ity no tantarako miaraka amin'i Puma. Nihalehibe aho nijery horonantsary misy angano baolina kitra mahafinaritra (miaraka amin'ny sarin'i Pelé, Johann Cruyff na Diego Maradona manokana, naoty an'ny Editor). Izy ireo no MPANJAKA tany an-tsaha. NY MPANJAKA amin'ny fanatanjahantena ahy. Izany indrindra no nofikoiko ho an'ny tenako. Te hanao izany araka ny fombako aho. Te hitondra ny lova noforonin'ireto atleta ireto aho. Tiako hanjaka any an-tsaha indray ny MPANJAKA, ary hanome aingam-panahy ny taranaka maro araka izay nanentanan'izy ireo ahy. Ity no tantarako miaraka amin'i Puma. Niverina ny ROI ” hoy ny mpitokona PSG taorian'ny fiaraha-miasa 15 taona niarahana tamin'i Nike.
Rihanna Aza ajanona ny mozika - DRAG MUSIC MIX EDIT - Video